networking - MYSTERY ZILLION
June 2012 edited June 2012 in Member ဆိုင်ရာ
Windows Server ဆိုရင်တော့ Networking (N+) သင်တန်းတွေမှာတစ်ခါတည်းသင်တယ်။ ပြီးတော့ကိုဇော်လင်း(Youth) ရေးထားတဲ့ Windows နဲ့ Linux Server စာအုပ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။
MICT ထဲက Linux Lab မှာလည်း Fedora Foundation/Advanced, Red Hat, Suse Fundamental/ Administration, LAMP သင်တန်းတွေရှိပါတယ်။ မိုးကောင်းဘုရားလမ်းမှာလည်း Net Universal ကဖွင့်တဲ့ Ethical Hacking သင်တန်းတစ်ခုရှိတယ်။ Server Attack တွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲသင်ပေးတာ။
Bro ! Unkind , I wanna know "Ethical Hacking" class Address ...
I've mailed to ur account, check the inbox.
Ethical Hacking သင်တန်: အကြောင်းသိချင်လို့ပါ အကို
No.15, မိုးကောင်းဘုရားလမ်း၊ မိုးကောင်းဘုရားမှတ်တိုင်အနား၊ ရန်ကင်းမြို့နယ် ၄၀၁၀၂၉၊ ၀၉၄၃၁၄၃၃၇၅